Maxaa Flex iyo Apollo u guuleysan doonaan | Martech Zone
Maxaa Flex iyo Apollo u guuleysan doonaan
Axad, Abriil 1, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Xalay waxaan la qaatay qaar ka mid ah asxaabta.
3-dii saacadood ee ugu horeysay ayaa lagu qaatay Xuduudaha ka shaqeynta goobta macmiilka oo lahaa xoogaa quirks iskutallaab-iskutallaab. Goobta waxaa lagu qoray si qumman, ansax ah CSS. Si kastaba ha noqotee, Firefox 2 ee kombuyuutarka liiska liistada liistada liistada leh ayaa si xun u wareejiyay pixel iyo Internet Explorer 6, mid ka mid ah hababka CSS ma shaqeyn gabi ahaanba.
Firefox 2 (hubi isbeddelka pixel-ka ee cajiibka ah ee ka dhigaya mid u eg mid la sheekeysto):
Tani waa sida ay tahay inay u ekaato:
Xaqiiqda taas Apple, Mozilla, Microsoft, Iyo Opera Awood uma laha qorista codsiyada adeegsada a Heerka Webka waa inuu mid kasta oo iyaga ka mid ah ka xishoodaa. Waan gabi ahaanba fahmi karay haddii biraawsar kasta uu leeyahay astaamo u gaar ah oo lagu taageeri karo qoraalkooda - laakiin tani waa waxyaabaha aasaasiga ah.
Tani waa tusaale fiican oo sababta Apollo iyo hayalka san fursad weyn oo aad ku nadiifiso internetka. Waxaan qoray dhowr maalmood kahor Scrapblog, codsi ku qoran Flex (oo si dhaqso ah loogu geeyo Apollo). Haddii aadan fursad u helin inaad aragto - tag tijaabi - maahan wax ka yaab badan.
Flex ayaa hoos maraya Adobe Flash's plugin browser. Tani waa plugin ah in 99.9% badan Internetku wuu socdaa (waad ordaa mar kasta oo aad fiiriso fiidiyaha Youtube). Apollo wuxuu adeegsadaa isla mashiinka laakiin wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhab ah ugu dhex ordo daaqadda dalabka halkii aad ku koobnaan lahayd biraawsarka.
Waa maxay Flex?
From Adobe: Nidaamka codsiga Flex wuxuu ka kooban yahay MXML, ActionScript 3.0, iyo maktabadda fasalka Flex. Horumariyayaashu waxay u adeegsadaan MXML inay si qeexan u qeexaan qaybaha isku xidhka isticmaalaha una isticmaalaan ActionScript macquulka macmiilka iyo xakamaynta nidaamka. Horumariyayaashu waxay qoraan koodhka MXML iyo ActionScript iyagoo adeegsanaya Adobe Flex Builder? IDE ama tifaftiraha qoraalka caadiga ah.
Marka la eego jahwareerka aan ka qabno dhismaha liis fudud oo iskudhaf ah, qiyaasi inaad iskudayeyso inaad dhisto codsi shabakad dhan ah oo laga taageerayo daalacayaasha! Ugu dambeyntiina, horumariyeyaashu waa inay qoraan hacks ama qoraal gaar ah oo loo yaqaan 'browser' si loo hubiyo khibrad isku mid ah iyada oo aan loo eegin nooca biraawsarka ama desktop aad naftaada ku shaqeyso. Ma jiraan arrimo iskudhaf-biraawsar iyo faa iidada dheeriga ah ee si fudud ugu gudbinta arjiga Apollo inuu ku dhex baxo ama ka baxo biraawsarka.
Marka laga reebo in aan laga walwalin sida ay ugu muuqato biraawsar kasta, waxaa jira faa'iidooyin kale. U qorida Flex-ka ayaa sameeya ma u baahan tahay xirfado barnaamij oo rasmi ah. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay sababta barnaamijyahanno badan oo xirfadlayaal ahi ugu maadsadaan isticmaalka Flex ama Adobe. Waxay doorbidi lahaayeen inaad kubixiso tobanaan kun oo doollar iyaga oo iyaga ku horumarinaya muuqaalka ASP.NET ee qaadanaya dhowr saf oo ah MXML.
Hadaad jeceshahay inaad kusii socoto Flex iyo Apollo, iska qor barta saaxiibkey Bill.
Istaraatijiyadaha Qaadashada Akhristayaasha ee Bloggers-ka Cusub
Technorati Ayaa Soo Saaraysa Qalabka Bogga… iyadoo la adeegsanayo Qalab Cool ah!
Apr 2, 2007 at 7: 08 AM
Si fiican ayaa loo yidhi Doug. Haddii ragga tikniyoolajiyadda suuqgeynta ay helaan, waxaan rajo weyn ka qabaa kuwa horumariya more
Apr 4, 2007 at 3: 28 AM
> Kani waa fiilo ay 99.9% ka mid ah Internetku shaqeeyaan
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka hubiso ishaada tirakoobkaas……
Waa tan, Abriil 2007 illaa iyo hadda ma haysto macmiil toosh ah oo ka hoos shaqeeya deegaankeyga desktop Ubuntu x86_64 (AMD64).
Apr 4, 2007 at 9: 55 AM
Istefanos - waad saxantahay… kani waa tirakoob aan la xaqiijin karin. Xaqiiqdii, waa waxa loo yaqaan a Swag.
Waan ka xumahay taas!
Apr 16, 2007 at 11: 43 AM
Halkan waxaa ah xiriiriye ku saabsan dhexgalka Flash - oo hadda ah 84.3% gelitaanka Flash Player 9.
Agoosto 21, 2007 saacaddu markay ahayd 11:15 PM
Si fiican ayaa loo yidhi Doug, Nice gelitaanka Stephen.
Agoosto 27, 2007 saacaddu markay ahayd 2:30 PM
Hmm .. Teknolojiyadaani runtii waa mid xiiso leh. Anigu ma ihi barnaamij-yaqaan, laakiin sida aad wax u qorto uma baahna. Waa hagaag, waan tagi doonaa oo waan hubin doonaa.
Oktoobar 22, 2007 at 9:18 AM
Maqaal aad u xiiso badan, ayaa ka fikiri doona.